जसका लागि श्रीमानलाई छोडिन्, उसैले चार्जरबाट लियो ज्यान – ताजा समाचार
जसका लागि श्रीमानलाई छोडिन्, उसैले चार्जरबाट लियो ज्यान
काठमाडौ । प्रेममा परेर सबै कुरा समर्पणपछि आफ्नै लीला सकिएका घटना धेरै छन् । किनकी समाजमा फिल्मी शैलीका अ पराधहरु बढिरहेका छन् । भारतमा अहिले लिभ इन टुगेदरमा बस्ने एउटी महिलाको यस्तै फिल्मी शैलीमा ह त्या भएको छ । केटी आफ्ना लोग्नेलाई छोडेर एक प्रेमीका साथ भाँडाको घरमा लिभ इन टुगेदर बस्न तयार हुन्छे ।
तर केही दिनपछि उनले श्रीमानलाई छोडेर प्रेमीको रुपमा रोजेको पुरुष नै का ल बनेर आउँछ । उनको श व ओ छ्यानमा फेला परेको छ। मोबाइल चार्जरले घाँ टी बे रेर उसको ह त्या गरिएको थियो। सुखविन्दर कौर दीपिन्दर नाम गरेका युवकसँग लिव इन सम्बन्धमा बस्दै थिइन् । उक्त रात एक स्थानीय उनीहरुको घर पुगे । जब उनी बेलुका घर पुग्दा सुखविन्दर ओछ्यानमा पल्टिएको देखे । तर उसलाई देखेपछि दीपिन्दर डराएर भाग्यो ।
स्थानीयले एम्बुलेन्स बोलाए । एम्बुलेन्समा अस्पताल पुग्दा सुखविन्दर जीवित थिइनन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले महिलाको ग ला द बाएर ह त्या गरिएको कुरा पत्ता लगाएको छ। उसको मोबाइल चार्जरले ग ला द बाइएको देखिएको छ । सुखविन्दर गत एक महिनादेखि दीपिन्दरसँगै थिइन् । उनी घदुवान गाउँकी बासिन्दा थिइन। २०१२ मा उनले रोपारका हरजिंदर सिंहसँग विवाह गरेकी थिइन्। हरजिंदर सिंह रोपारमा मजदुरको रूपमा काम गर्दछन्। उनलाई छोडेर ति युवती प्रेमसँग गएकी थिइन् ।
र यो भिडियो पनि हेर्नुहोस
मालालाई लिएर पुण्य गौतम एक्कासी टेकु पुगे ! के होला अब ?
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : February 2nd, 2020,